ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်း မြို့တော်စီမံကိန်းတွင် (၅)နှစ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၁၅)ဘီလီယံရရှိအောင် ဆွဲဆောင်သွားမည်ဟု သီရိလင်္ကာ ဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား - Xinhua News Agency
ဝေးလံခေါင်သီဒေသမှ တောတောင်သဘာဝအလှရှုခင်းများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူ ခရီးသွားအရင်းအမြစ်အဖြစ် ပွင့်လန်းလာ
မန်စီးတီး နောက်တန်းကစားသမား Rúben Dias က ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘောလုံးရာသီ အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ် အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လှုပ်ရှားမှုအများဆုံး Mount Merapi မီးတောင်ရှင်မှ မီးခိုးပူများ မှုတ်ထုတ်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မေလတွင် အလုပ်အကိုင်နေရာပေါင်း ၆၁၉,၀၀၀ ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ ၊ အလုပ်လက်မဲ့ ၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းမြို့၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကိုလံဘို၊ ဇွန် ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းမြို့တော်စီမံကိန်းတွင် (၅)နှစ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅)ဘီလီယံရှိလာရန် စွဲဆောင်နိုင်ဖို့ အစိုးရက ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သီရိလင်္ကာဝန်ကြီးချုပ် Mahinda Rajapaksa က အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။သီရိလင်္ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖိုရမ်(SLIF)ဒုတိယနေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်က ”ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဥပဒေနှင့်စီးပွားရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စေမယ့်မူဘောင်တွေ ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေက အဲဒီကတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်တယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
(၃)ရက်ကြာ virtual event အွန်လိုင်းပုံစံ ကျင်းပသည့် သီရိလင်္ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖိုရမ်(SLIF)ကို သီရိလင်္ကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့၊ Ceylon ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ ကိုလံဘိုစတော့အိတ်ချိန်းတို့မှ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အရည်အသွေးမြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ကြီးမှူးကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကို ပြသထားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် မူဝါဒချမှတ်သူ ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်မည့် အခွင့်အလမ်းများ တည်ဆောက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းမြို့တော်သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံမှ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး (၂၆၉)ဟက်တာရှိ ကိုလံဘိုမြို့နှင့်ပင်လယ်ပြင်မြေဖို့တည်ဆောက်ထားသည့်နေရာ၌ ဝန်ဆောင်မှုပုံစံအထူးစီးပွားရေးဇုန်(SEZ)အဖြစ် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းမြို့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏အစိမ်းရောင်ဥယျာဉ်ဧရိယာအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာဝန်ကြီးချုပ် Mahinda Rajapaksaက ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလတွင် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး ကျပ်တည်းခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး(GDP) ၃.၆ ရာခိုင်နှုန်းကျုံ့ဝင်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ လှုပ်ရှားသက်ဝင်သည့်လုပ်ငန်းခွင်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်၍ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ထုတ်ကုန်စွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်စေရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ၎င်းက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဘောင်နှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပမာ Hambantota စက်မှုဇုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပုံစံကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းမြို့တို့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအတွက် ပြည့်ဝသည့် အခွင့်အလမ်းများ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရက ရည်မှန်းချက်ကြီးမားစွာဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ခဲ့ရာ အားလုံး ရေအရင်းအမြစ် အသုံးပြုနိုင်ရေး အာမခံချက်ရှိစေရန် ဆောက်ရွက်ခဲ့သလို အရှည် ကီလိုမီတာ (၁)သိန်းရှိသည့် လမ်းများကိုလည်း ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်း Mahinda Rajapaksaက ဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဘတ်ဂျက်တွင် အဆိုပြုထားသည့် အခွန်ဖြေလျှော့ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမဟုတ်သောအခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဖန်တီး တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
“ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို မျှော်လင့်ထားတယ်” Rajapaksa က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Sri Lanka aims to attract 15 bln USD investment to Colombo Port City project in5years: PM
COLOMBO, June9(Xinhua) — Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa said on Tuesday that his government aims to attract 15 billion U.S. dollars to Colombo Port City project in the next five years.
Speaking on the second day of the Sri Lanka Investment Forum (SLIF), the prime minister said “We have already established the legal and business facilitation framework throughanew act… Investors will be able to obtain all the services from one counter.”
The Port City Colombo isajoint venture between Sri Lanka and China to developaservice-oriented Special Economic Zone (SEZ) in 269 hectares of land reclaimed from the ocean and annexed to the city of Colombo.
The prime minister said that businesses in the country endured hardship amid the COVID-19 pandemic in 2020, which resulted ina3.6-percent contraction of gross domestic product (GDP), adding that there wasaneed to turn the country into an active worksite again,and to attract investments to develop infrastructure and increase the production capacity of the country.
He called for wider capital investments to help the country achieveagrowth rate of6percent, saying that the country’s macroeconomic framework and SEZs such as the industrial zone in Hambantota and the services-oriented Colombo Port City provide ample opportunities for investors.
The prime minister said that his government had initiated ambitious infrastructure projects to ensure access to water for all, and to build 100,000 km of roads. Tax breaks and financial and non-financial incentives proposed in the last Budget are being implemented to createaconducive environment for investment.
“Our expectation is to encourage world-renowned investors to come to invest in our country,” Rajapaksa said. ■
Photo 1 – Aerial photo taken on Sept. 23, 2020 showsaview of the construction site of the Colombo Port City in Colombo, Sri Lanka. (China’s CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd./Handout via Xinhua)
Photo2– Aerial photo taken on Sept. 23, 2020 shows the construction site of the green garden areas of the Colombo Port City in Colombo, Sri Lanka. (China’s CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd./Handout via Xinhua)